Dama Mahaleo « Ambany ny Moralinay »
Ankafina Tsimafody Ny olombelona no misolo ny omby mitarika sarety
Mirongatra ny asan-dahalo any amin’ny kaominina ambanivohitra Ankafina Tsimafody, distrikan’Ambalavao.
Fepetra fihibohana Tsy voahaja noho ny hasarotam-piainana
Efa nisy ny fihibohana amin’ny ampahany nandritry ny 1 volana miandoha amin’ny 12 ora tolakandro toy izao raha vao nanomboka tafiditra teto Madagasikara ity valanaretina Coronavirus ity.
Fanarenana an`i Madagasikara Hanampy tosika i Frantsa
Manampy tosika ny fanjakana sy ireo rafitra ara-pahasalamana Malagasy mba hahafahana manampy azy ireo i Frantsa indrindra eo amin`ny lafin` ny fampitaovana, hoy ny masoivoho frantsay, Christophe Bouchard.
Faritra Atsimon’ny nosy Nahazo 4,16 tapitrisa dolara ny fampianarana
Nahazo famatsiam-bola avy amin` ny fanjakana Norvezianina indray ny fandaharanasa Fanabeazana ho an` ny rehetra.
Noho ny fitsinjovana ny fahasalaman’i Fafah, izay andry fototry ny tarika Mahaleo amin’ny lafiny feo,
dia tsy hiakatra an-tsehatra izy amin’ny alahady izao izay hanatanterahana ny seho farany ataon’ny tarika amin’ity taona ity. Nanambara i Dama omaly tetsy amin’ny Skate Park Antanimena nandritra ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety fa ambany ny « morale » saingy antenain’izy ireo ny fanohanan’ireo mpankafy hatrizay ny tarika amin’izao vanim-potoana mafy lalovan’izy ireo izao. Ho amin’ny alahady izao dia i Ony avy ao amin’ny tarika Zandry Gasy izay mpankafy sady manana ny angolam-peon’I Fafah no hanatevina ny tarika eny an-tsehatra, araka ny fanambaran’i Dama. Tsiahivina fa fahasemporana noho ny toetr'andro manorana tampoka tany Antsirabe nandritra ny fampisehoana tamin’ny farany no nanjo an'i Fafah kanefa izy mihitsy no nangataka mba hiverina an-tsehatra eto Antananarivo. Hentitra ihany koa i Dama nilaza fa tsy marina ireo tsaho sy feo haely milaza fa atao fitaovana fitadiavam-bolan’ny tarika ny aretin’i Fafah.